Soo Iibso Naas-nuujinta Si Loo Kordhiyo Dabiiciga Pueraria Mirifica Lobata Root Extract Powder - Rar Bilaash ah & Cashuur La'aan WoopShop®
Naas-nuujinta Kor U Qaadista Dabiiciga ah Pueraria Mirifica Lobata Root Extract Powder
$ 60.99 qiimaha joogtada ah $ 63.99
Color 200g 100g 500g 1000g
Naasnuujinta Naxariista Dabiiciga ah Pueraria Mirifica Lobata Root Extract Powder - 200g gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Waxyaabaha ay ka kooban tahay: Soosaarida Pueraria Lobata
Nambarka Tusaalaha: 823121
Nooca: Soosaarida Pueraria Lobata
Magaca: Pueraria lobata (Duur.) Ohwi (Xidid)
Miisaan: 100g, 200g, 500g, 1000g
Nafaqada: 24 bilood
Shahaadada: FDA / ISO / GMP
Muuqaal: Budada bunni
Habka Soosaarida: HPLC
Waxqabadka: Badbaadinta Cagaarshowga, Ballaadhinta Badarka, Kobcinta Naasaha Ballaadhinta Cudurka Nefropathy, iyo Renal failure
Qaaciidada: Soosaarida Dhir Dabiiciga ah
Goobta Asalka: Liaoning, China (Dhul Weyn)
Habka Imtixaanka: HPLC / UV
Pueraria Mirifica, sidoo kale loo yaqaan Kwao Krua ama White Kwao Krua, waa xidid laga helo waqooyiga iyo waqooyi-bari Thailand iyo Myanmar. Kwao Krua waa warshad dhir dhalad ah oo laga helo keynta dheer ee gobolka woqooyi ee Thailand. Cilmi baarayaashu dhowrkii sano ee la soo dhaafay waxay baareen astaamihiisa waxayna qiimeeyeen adeegsiga caafimaad ee suurtagalka ah.
Puerarin waxaa loo isticmaali jiray in lagu xoojiyo difaac isla markaana la joojiyo unugyada kansarka
Puerarin wuxuu leeyahay adeegsiga qaadashada saameynta kahortaga nephritis, nephropathy, iyo kelyaha oo shaqeynaya
Puerarin oo leh shaqada xoojinta foosha myocardial iyo ilaalinta unugyada myocardial
Puerarin wuxuu leeyahay waxtarka ilaalinta cilladaha erythrocyte, iyadoo la kordhinayo shaqada nidaamka hematopoietic.
Naasnuujinta Naasaha Weyn
Kudzu Root Extract oo lagu dabaqay goobta cuntada, waxaa loo isticmaali karaa cuntooyinka iyo wax soo saarka caafimaadka, si loo yareeyo cadaadiska dhiigga iyo dufanka dhiigga
Lagu dhajiyay aagga daawada, Kudzu Root Extract waxaa si weyn loogu isticmaalaa daawooyinka jirka lagu daweeyo iyo API ee wakiilada nidaamka wadnaha iyo wadnaha ee Shiinaha. Sida nooc ka mid ah cirbadeynta daawada Shiinaha, puerarin waa daawo guud oo loogu talagalay wadnaha iyo cudurka wadnaha;
Waxaa lagu dabaqay goobta la isku qurxiyo, saamaynta phytoestrogen ee Kudzu Root Extract waxay yareyn kartaa astaamaha ay sababaan hoos u dhaca heerka estrogen iyo gabowga, sida mastoptosis, crinkle, hoos u dhaca maqaarka firfircoonida iyo leukotrichia. Sidaa awgeed, waxaa badanaa loo isticmaalaa kareemka naasaha, kareemka indhaha iyo kareemka maqaarka.